Munaasabadda Mowliidka oo Gaalkacyo laga xusay – Radio Daljir
Diseembar 23, 2015 10:10 b 0
Somalia, December 23, 2015-(Daljir)_ Madaweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxaa uu ka qayb galay Isi soobax lagu xusayey maalinka Dhalashada Rasuulka (SWC), waxaana uu halkaas ka jeediyey Khudbad kooban.
Banaan baxaan waxaa kasoo qayb galay, dadweyne aad u farabadan, ku waas oo watay gadiid tirobadan, waxaana ay socod dheer ku mareen dhamaan magaaladda Gaalkacyo, ugu danbayntiina waxay isugu soo ururay Banaanka hore ee dhismaha madaxtooyada cusub Gaalkacyo.
Gaas oo la hadlay dadka isu soobaxay oo ka koobnaa labada dhinac ee magaaladda Gaalkacyo, Isaga oo sidoo kalana halkaan ka qaaday Qsiido Nabi amaan ah. Dadka isu soobaxay oo si wada jir ah u xusayey maalinka Dhalashada Rasuulka SCW, iyada barina la filayo in lagu qabto gadiga koon fureed ee Magaaladda.
“Waan ku faraxsannahy in aanu idin kalasoo qayb galnyo, Xuska dhalashada Rasuulka SCW, ka dawladda haana diyaar ayaan u nahay, wixii nooga aaday in aanu idin kala qayb qaadano, Idinkuna wanaag iyo khayrka halkaas kasii wada” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Ugu danbayntii waxaa halkaas khudbooyin ka jeediyey culimo, Abwaano ka gabyey, waxgaran iyo dhalinyaro da’ayar ah oo qaadayey qasiidooyinka lagu amaanayo Rasuulka SCW.